Rita, Writing for My Sake!: လတ်တလော
Posted by Rita at 1/11/2010 09:48:00 AM
I you got that idea you will keep negative mind and trouble to yours enemies.
စေတနာနဲ့ သတိပေးတာ ကျေးဇူးပါ အန်ကယ်။
ကျွန်မမှာ ကျွန်မက ရန်သူလို့ သတ်မှတ်တဲ့သူ (online လောကမှာ) မရှိပါ။
လူတစ်ယောက်ကို ရန်သူလို့ သတ်မှတ်ဖို့ အင်မတန် ခဲယဉ်းပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ လူတစ်ယောက်ကို ရန်သူလို့ သတ်မှတ်ဖို့ရာမှာ ပထမဆုံးလိုတဲ့ အချက်က - အဲဒီလူဟာ ကိုယ့်ဘဝမှာ တော်တော်ကို အရေးပါတဲ့ အရေးကြီးတဲ့လူ ဖြစ်နေမှ ရပါမယ်။
နေ့စဉ်ဘဝမှာ ပါဝင်ပတ်သတ်သူ ဖြစ်နေမှလည်း ရပါမယ်။
ကိုယ့်ဘဝကို သူ့လုပ်ရပ်တွေက တိုက်ရိုက်အကျိုး သက်ရောက်မှုလည်း ရှိနေရပါဦးမယ်။
ခုချိန်ထိ ကံကောင်းတာက အဲလိုလူတွေထဲမှာလည်း ရန်သူဖြစ်လောက်တဲ့သူ မပါခဲ့ဘူး။
ကျွန်တော်လည်း လက်တလော ကိုတေဇာ စာတွေ ဖတ်နေမိတယ်။ ပို့စ်မော်ဒန်တွေ ဘာတွေ စိတ်မ၀င်စားပါဘူး။ သူရေးထားတဲ့ စတိုင်တွေကို ကြိုက်တာပါ။ သူများဘလော့ လာပြီး တခြားအကြောင်းတွေ ပြောနေမိပြီ။ အကြိုက်တူတယ် ပြောတယ်ပဲ မှတ်ပေးပါ။ :)
ပြောရတော့ ခက်တယ်။ တစ်ချို့ အခြေအနေတွေ မှာမှန် ပြီး တစ်ချို့ အခြေအနေတွေမှာ တော့ မှန်ဖို့ မလွယ်ဘူး လို့ ထင်ပါ့။